Hiova ny tantara: hifantohana ny fampandrosoana ny faritra Anosy sy Androy | NewsMada
Hiova ny tantara: hifantohana ny fampandrosoana ny faritra Anosy sy Androy
Par Taratra sur 14/06/2021
Nifarana ny 12 jona 2021 ny Fikaonandoha lehibe ifotony ho fampandrosoana ny faritra atsimon’i Madagasikara. Maro ny lohahevitra sy ny lafin-javatra nodinihina sady notapahina fa hotanterahina.
Tapaka nandritra ny fikaonandoha ho an’ny fampandrosoana ny tapany atsimon’i Madagasikara, ny paikady mifanaraka amin’ireo sehatrasa tsirairay hoentina hamahana ny olana amin’ny lafiny sosialy sy toekarena any amin’ireo distrika rehetra ao anatin’ny faritra Anosy sy Androy.
Vahaolana ho an’ny tsy fisian’ny rano any atsimo ny fitarihan-drano lehibe amin’ny alalan’ny fantsombe. Hoentina hanondraka ny veralan-tany hamokarana, ary misy koa ho an’ny rano fisotro. Hampiroborobo ny fambolena sy ny fiompiana izany hanatrarana ny tanjona fahavitan-tena ara-tsakafo araka ny veliranon’ny filoha Rajoelina. Eo koa ny fananganana toeram-pitsaboana hanatsarana ny lafiny fahasalamana.
Atomboka amin’ny tetibolam-panjakana
Anisan’ny nisongadina tamin’ity fikaonandoha ity koa ny fanarenana ireo lalam-pirenena, ny RN 13, ny RN 10 ary ny RNT 12 A. Eo koa ny fampiasana ny angovo azo havaozina, ny fandriampahalemana, ny fananganana indostria hanodina ny vokatra any an-toerana, sns.
Nambaran’ny filoham-pirenena, fa hatolotra ireo mpiara-miombona antoka sy ny mpamatsy vola ireo paikady novolavolaina. Atomboka avy hatrany kosa ny tetikasa azo tanterahina avy amin’ny tetibolam-panjakana, satria tsy afaka miandry ny fampandrosoana ny faritra atsimo. “Napetraka ny fanamby ary isika rehetra no hiaraka hanova ny tantaran’ny faritra atsimo sy Madagasikara manontolo”, hoy ihany izy.